Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Filipina tamin’ny Oktobra 2018
Filipina · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Filipina tamin'ny Oktobra, 2018
Mpanoratra John Kennedy · Etazonia
Vondrona milisy mamono tantsaha ao amin'ny toeram-pambolena fary ao Filipina, hoy ny iraka mpanamarina ny zavanisy
Ny fandripahana tao "Sagay 9" no fanafihana iray nahafatesana tantsaha mpikatroka betsaka indrindra nandritra ny fitantanan'i Rodrigo Duterte.
Filipina: Mitarika ny Filipiana amin'ny famahanana bilaogin-dahatsary ny CokskiBlue
Mpanoratra Tonyo Cruz · Mediam-bahoaka
CokskiBlue dia rivo-baovao ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ao Filipina, ary manasongadina lahatsary, bilaogin-dahatsary ary bilaogim-pandefasam-peo.
Mpanoratra Mong Palatino · Fahalalahàna miteny
Filipina: Kalo Mena
Mpanoratra Jose Manuel Tesoro · Hevitra
Tsikerain'i i caffeine_sparks ny ''famelomana indray'' ny Kaominisma nataon'ny fanjakana Filipiana ho toy ny raho-mitatao amin'ny fitoniana nasionaly
Voadarodaroka ny fahalalahan-gazety ao Filipina
Hatramin'ny nirodanan'ny didy jadona Marcos tamin'ny taona 1986, nosokajiana toy ny amin'ireo malalaka indrindra manerantany ny gazety Filipiana. Saingy tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nahatsikaritra fanafihana miely patrana amin'ny fampahalalam-baovao Filipiana ireo vondrona samihafa.
Mpanoratra Melissa De León · Amerika Avaratra
‘Gabbie’ chatbot manampy ireo niharam-boina manoloana ny fanorisorenana ara-nofo ao Filipina
Mpanoratra Mong Palatino · Hevitra
Fantaro i Gabbie, chatbot fandefasan-kafatra ao amin'ny Facebook izay manampy ny Filipiana hitatitra ny tranganà fanafihana sy fanorisorenana ara-nofo. Gabbie dia tetikasan'ny Gabriela, vondrom-behivavy iray ao Filipina.